Iglasi isitya esitsha
I-pepper emnyama grinder
Iglasi enqwenela ibhotile
Injongo yokupakisha kwezinto zokuthambisa
ngu admin nge-20-05-12
Kukho izizathu ezahlukeneyo zokuba ukhathalelo lubekwe kwizitya zokuthambisa. Ayisiyomfuneko yokukhusela imveliso, kufuneka ibonelele abathengisi kwaye abathengi ekugqibeleni. Eyona njongo iphambili yesitya sokucoca umzimba kukukhusela imveliso ngelixa igcinwe okanye ihambisa ....
Kutheni ukhetha iJinguanyuan Packing Products Co, Ltd.
ngu admin nge-20-05-07
IXuzhou Jinguanyuan ukupakisha iimveliso Co, Ltd yinkampani egxila kwimveliso nasekuqhubeni iibhotile zeglasi, iikomityi zeglasi, izipho zentengiso kunye nezinye iimveliso. Inenkqubo yokulawula umgangatho kunye nesayensi esemgangathweni. Ukunyaniseka, amandla kunye nemveliso ...
Xuzhou Jin Guan Yuan Ukupakisha iimveliso Co, Ltd.
ngu admin nge-19-08-12
UKUGCINWA KWEXESHA ELIJONGILEYO Ezi zityana zeglasi ziphezulu zinesiciko esikhulu esigqibeleleyo esikumgangatho ophezulu okubandakanya irabha yerabha ukuqinisekisa ubungqina obuvuzayo kunye netywina lomoya ngokungafaniyo nezinye zejezi zeglasi. IZEMPILO NOKUZONWABISA Iiglasi lukhetho olusempilweni ngaphezu kokugcinwa kweplastiki. Iglasi ayichaphazeli, igcine ivumba, o ...
UKUTYA KOKUGQIBELA NGOKUKHUSELEKILEYO BPA YOKUGQIBELA Yenziwe ngomgangatho ophezulu, okhuselekileyo wokutya okhuselekileyo iibhotile ziya kuyigcina imixholo yayo intsha ngaphandle kokongeza izinto, ivumba okanye ukwakheka kulwelo abalubambayo, nasemva kwexesha elide. UKHUSELEKO LWE-NYLON LOKUKHUSELA Imikhono yekhuselo yenaylon ivumela ibhotile yeglasi ukuba j ...
Yiba yinxalenye yesiko
Iingcebiso - Iimveliso ezishushu - Imephu - I-AMP Iselula
Iiglasi zeCosmetic zeGlasi kwiibhotile zeoyile, Iglasi yezipho zeglasi, Ibhotile ye-cosmetic, Iglasi yeJar Cosmetic, Iseti yeBhotile yeZithambiso, Iglasi yeBhotile yeZithambiso,